Fampiharana ho an'ny iPhone | IPhone News (Pejy 3)
Messenger Room no mpisolo toerana Facebook vaovao an'ny Zoom sy Skype
Facebook dia nanolotra ny Messenger Room, sehatra fiantsoana horonantsary vaovao ahitana mpandray anjara hatramin'ny 50, izay mifaninana amin'ny Zooman'ny Microsoft sy Meet Now.
Ny fampiharana tsara indrindra hanaovana antso an-tsary
Betsaka ny rindranasa ahafahana miantso video avy amin'ny iPhone na iPad ary amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny safidy tsara indrindra azo atao.
Apple manokatra kaonty TikTok
Nanokatra kaonty tao amin'ny TikTok i Apple, tambajotra sosialy mifandraika izay nahita fitomboana mahatalanjona hatramin'ny areti-mandringana.
Mihoatra ny mpampiasa 300 tapitrisa ny serivisy fiantsoana horonantsary
Ny serivisy villamadas mampiady raharaha Zoom, dia nanambara fa vao nihoatra ny 300 tapitrisa isan'andro ny mpampiasa azy, na eo aza ny olana ara-piarovana sy fiainana manokana
Apple dia mety mamorona mpamorona azy manokana amin'ny lalao
Ny tsaho iray dia manondro ny asan'ny ekipa iray ao Apple mba hampivelatra ny mpandrindra azy manokana amin'ny lalao. Remote an'ny Apple ho an'ny iOS
Beyond Blue sy Fold Apart no anaram-boninahitra roa hita ao amin'ny Apple Arcade
Lohateny vaovao roa no nampiana ho an'ny katalaogin'i Apple Arcade, lalao fikarohana ary lalao piozila
PDF Expert dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny maodely famakiana PDF tsara indrindra ho an'ny iPhone
Ny rindranasa PDF Expert dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny maody famakiana Document PDF tsara indrindra ho an'ny fitaovantsika finday.
GoodNotes dia mandefa kinova iraisana ho an'ny iPhone, iPad ary Mac
GoodNotes dia mandefa ny kinova iraisana ho an'ny iPhone, iPad ary Mac. Raha efa ampiasainao amin'ny iPad anao izany dia ampidino maimaim-poana amin'ny iPhone sy Mac anao.
Instagram izao mamela anao handefa hafatra mivantana avy amin'ny tranonkala sy hankafy hetsika mivantana
Ny Instagram dia nanisy fiasa vaovao roa ho an'ny kinova tranonkala, fiasa izay tsy misy afa-tsy amin'ny kinova ho an'ny finday
Ny NHS momba ny fahasalamana UK dia efa manomana ny fampiharana fanaraha-maso mifototra amin'ny fifanarahana Apple-Google
Ny NHS momba ny fahasalamana any UK dia efa manomana ny fampiharana fampiharana azy mifototra amin'ny fifanarahana Apple-Google. Mampitandrina izany raha efa teo akaikin'ny aretina izy ireo.
HomePass dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao sy fanohanana ny Shortcuts
HomePass dia mitahiry ny kaody amin'ny kojakoja rehetra mifanaraka amin'ny HomeKit mba hahafahanao mahazo azy ireo foana, ary koa ireo safidy mahaliana hafa.
Miresaka telecommute ve ianao? Adobe Scan dia mijery ny antontan-taratasinao avy amin'ny iPhone
Ny Adobe Scan no fampiharana tsara indrindra hijerena antontan-taratasy amin'ny iPhone-nao ary hitahiry azy ireo amin'ny PDF.
Facebook dia mandefa Mode Silent vaovao ho antsika hifehezana ny fotoana lanintsika amin'ny tambajotra sosialy
Ny bandy avy amin'ny Facebook dia mandefa Mode Silent vaovao hanampiana anay hifehy ny fotoana laninay amin'ny tambajotra sosialy amin'izao andro fitanana izao.
Linea Sketch dia nohavaozina amin'ny kinova 3 miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Linea Sketch dia nohavaozina amin'ny andiany 3 miaraka amin'ny vaovao mahaliana. Ny fotoana tapany, ny QuickToggle ary ny fandokoana ny sary dia manamora ny famoronana sary an-tsary.
Forza Street Races Ho tonga amin'ny iOS sy iPadOS amin'ny 5 Mey
Forza Street Car Racing Game Tonga any amin'ny iOS sy iPadOS ny talata 5 mey ho avy izao
Touchgrind BMX 2 ho an'ny fialamboly kilasika
Touchgrind BMX 2, kilalao kilalao taloha dia nentina tamin'ny teknolojia avo lenta an'ny iPhone, alao ny bisikiletanao kely ary manaova fika.
Ahoana ny fomba hizarana horonan-tsary sy sary ao amin'ny Google Photos miaraka amin'ilay endri-javatra fandefasan-kafatra vaovao
Miaraka amin'ilay fampitaovana fandefasan-kafatra vaovao nampidirin'i Google Photos, dia mora kokoa ny mizara sy manome hevitra momba ny sary sy horonan-tsary.
Ny pejy, isa ary Keynote izao dia mamela antsika hiditra sy hitahiry rakitra ao anaty lahatahiry iCloud zaraina
Ny pejy, Nomery ary Keynote, dia mamela antsika hamorona sy hitahiry antontan-taratasy amin'ny lahatahiry nizara taorian'ny namoahana ny iOS 13.4
Afaka mampiasa Siri ianao izao hihainoana ny Spotify amin'ny Apple Watch
Ny fanavaozana farany Spotify dia ahafahanao mifehy ny playback Spotify avy amin'ny Aple Watch anao amin'ny alàlan'ny Siri mpanampy an'i Apple.
Ny valintenin'ny YouTube an'i TikTok dia hatao hoe "Shorts"
Google dia miasa amin'ny fomba hafa hisolo ny TikTok hantsoina hoe Shorts, ny daty andrasana izay tsy fantatra.
iOS 13.4.5 dia mamela ny fizarana hiran'ny Apple Music amin'ny Instagram Stories
Ny iOS 13.4.5 dia hahafahan'ny mpampiasa mizara ireo hira Apple Music ankafiziny amin'ny alàlan'ny tantara Instagram mivantana
Apple mividy ny fampiharana toetrandro Dark Sky
Nividy ny fampiharana toetrandro Dark Sky i Apple, fampiharana iray izay mety ho lasa fampiharana toetrandro ao amin'ny iOS ho avy.
Misokatra Coronavirus manolotra fomba iray hiadiana amin'ny ECOVID-19
Manome tetik'asa mahomby 100% ho an'ny governemanta izy ireo hanohizany ny ady amin'ny coronavirus ary hanohy ny hetsika mahazatra
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia mampihetsika ny vondrona WhatsApp amin'ny teny Espaniola mba hisorohana ireo hosoka Coronavirus
Fantaro tsara momba ny Coronavirus noho ny vondrona WhatsApp vaovao amin'ny teny Espaniôla avy amin'ny World Health Organization.
SignEasy dia mampifangaro ny Face ID mba hiarovana sy hanaovana sonia ny antontan-taratasinao
SignEasy dia nanambatra ny Face ID ho ao anatin'ny rafiny iray manontolo, manomboka amin'ny fidirana amin'ny fampiharana ka hatramin'ny fanaovana sonia antontan-taratasy nomerika.
Ny fampiharana Apple Developer dia manampy fanatsarana ny playback video
Apple dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny fampiharana Apple Developer hanatsarana ny fifandraisana amin'ny horonan-tsary, satria io no ho sehatra ampiasaina amin'ny WWDC 2020 manaraka
Ny "Midira amin'ny Apple" ve no vahaolana amin'ny olana momba ny fiainana manokana?
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, hitantsika ny isan'ny fampiharana sy serivisy ahafahantsika mampiasa ny kaontinay ...
Monument Valley 2 sy Lara Croft GO maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ireo lalao roa asehonay anao anio mba alaina maimaim-poana, Monument Valley 2 sy Lara Croft GO, dia lalao ankamantatra handany fialamboly mandritra ny ora maro
Pro Camera mamela ny firaketana ny timelaps amin'ny fanavaozana vaovao
Pro Camera dia nohavaozina amin'ny kinova 4.0 izay mampahafantatra ny mety hahavitana timelaps amin'ny fanondranana amin'ny 4K sy HDR.
Shazam ho an'ny iPad dia novaina hanohanana ny Split View
Ny fanavaozana ny rindrambaiko Shazam farany, ao amin'ny kinova ho an'ny iPad, dia manome antsika fanohanana amin'ny asan'ny Split View.
Google Podcast dia misy ao amin'ny App Store
Ny fampiharana podcast an'i Google dia hita ao amin'ny App Store ankehitriny. Miresaka momba ny Google Podcast izahay, fampiharana iray manana endrika mitovy amin'ilay kinova Android
Disney + dia azo alaina ao amin'ny iOS, iPadOS ary tvOS
Disney + dia azo alaina ao amin'ny iOS, iPadOS, ary tvOS. Androany manomboka ny fandefasana ny sehatra fandoavam-bola vaovao an'ny Disney.
Malalaka mandritra ny fotoana voafetra ny lalao Kingdom Rush Frontiers sy ny Kingdom Rush Origins
Mba hamakivakiana ireo efapolo andro ireo dia manolotra lalao vaovao roa azonay alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra.
Lalao 5 maimaim-poana ho an'ny ankizy azo alaina mandritra ny fotoana voafetra
Ireto misy lalao 5 ho an'ny ankizy azontsika sintonina maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra.
Bodyweight Fitness Challenge dia manome famandrihana mandritra ny androm-piainan'ity fampiharana ity hanao fanatanjahan-tena nefa tsy miala ao an-trano
Tsy ny olona rehetra no manana fotoana ampy handehanana any amin'ny gym na handehanana hihazakazaka. Ho an'ity karazana biby fiompy ity, ...
Ny fampiharana Salud Responde, avy amin'ny governemanta Andalosiana, dia manampy antsika hanamarina raha afaka manana ny coronavirus isika
Ny fampiharana Salud Responde, avy amin'ny governemanta Andalusian, dia nanisy fiasa vaovao ahafahantsika mahafantatra raha voan'ny coronavirus izahay
Ny mpikarakara ny lahasa Things dia tonga amin'ny Apple Watch ary lasa tsy miankina amin'ny iPhone
Ny mpitantana ny raharaha Things malaza dia nohavaozina mba hahaleo tena ao amin'ny Apple Watch ary hanana fampifanarahana lehibe kokoa noho ny Things Cloud.
iOS 14 dia hamela antsika hamafa ireo hafatra alefantsika amin'ny alàlan'ny fampiharana Messages
Apple dia afaka manampy fiasa vaovao amin'ny rindranasan'ny Messages, lasa clone WhatsApp raha ny tokony ho izy
Spotify dia manavao ny fampiharana azy mba hanomezana toro-hevitra manokana anay
Ireo tovolahy ao amin'ny Spotify dia manavao ny fampiharana azy ireo amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny takelaka Home izay ahafahantsika mahita tolo-kevitra bebe kokoa mifototra amin'ny tsiro mozika.
Wunderlist dia manana 2 volana hijanonana amin'ny asany
Misy latsaky ny 2 volana mandra-pijanonan'ny mpitantana ny lahasa Wunderlist, ka tonga ny fotoana mitady vahaolana hafa.
Ny App Store dia mandà ireo fampiharana mifandraika amin'ny coronavirus izay tsy avy amin'ny rafitra ofisialy
Avy amin'i Apple dia lavin'izy ireo ny rindranasa rehetra mifandraika amin'ny coronavirus izay tsy avy amin'ireo fikambanana na andrim-panjakana.
Ny Command Missile Atari dia ho avy tsy ho ela amin'ny iOS sy iPadOS
Ho tonga tsy ho ela ao amin'ny iOS ny Commandant Missile Atari. Ny lalao milina arcade mahazatra an'ny Atari dia ho tonga amin'ity lohataona ity amin'ny iOS, iPadOS ary Android.
Nanavao ny Messenger Messenger ny Facebook mba hihamafana sy haingana kokoa
Ireo tovolahy ao amin'ny Facebook dia manavao ny fampiharana fandefasan-kafatra Messenger amin'ny alàlan'ny kit fampandrosoana Apple ary mihamazava sy haingana kokoa.
Mario Kart Tour Real-Time Multiplayer ho an'ny iOS Azo alaina amin'ny 8 martsa
Multiplayer real-time an'i Mario Kart Tour ho an'ny iOS azo alaina amin'ny 8 martsa. Azonao atao ny mifaninana amin'ny namanao amin'ny fomba lalao telo.
Mila fahazoan-dàlana avy amin'ny governemanta Shinoa mialoha ny fizarana fampiharana azy ireo amin'ny App Store
Ireo mpamorona izay mikasa ny hanolotra ny fangatahany any amin'ny tanibe Shina dia tsy maintsy mahazo fankatoavana avy amin'ny governemanta Shinoa.
Spotify ho an'ny iOS dia novaina tamin'ny bokotra kisendrasendra vaovao
Spotify ho an'ny iOS dia novaina tamin'ny bokotra kisendrasendra vaovao. Bokotra mozika kisendrasendra vaovao, interface vaovao ary lisitry ny hira vaovao.
Ny app Shadow, ny serivisy lalao video tahaka ny Stadia, nesorina tao amin'ny App Store
Shadow, serivisy fandefasana lalao video, dia nahita an'i Apple nanala ny fampiharana avy tao amin'ny App Store tamin'ny fanapahana torolàlana manan-danja iray
Adobe Lightroom dia manampy fanohanana ny Split View amin'ny iPad sy ny fanatsarana ny workflow amin'ny Mac
Ireo tovolahy ao amin'ny Adobe dia manavao ny Adobe Lightroom amin'ny alàlan'ny fanampiana ny iPadOS Split View, afaka manokatra varavarankely maromaro miaraka amin'izay isika.
Nanambara i Microsoft fa hitondra Windows Defender ao amin'ny iOS izy
Nanambara i Microsoft fa handefa ny rafitra fiarovana mandrahona mandroso antsoina hoe Microsoft Defender amin'ny iOS sy Android izy.
Office, ilay fampiharana izay atambatra ny Word, Excel ary PowerPoint, dia azo alaina izao
Office, ilay fampiharana Microsoft vaovao izay mampiditra Word, Excel ary Powerpoint dia efa misy ao amin'ny App Store.
Microsoft's Project xCloud beta ho an'ny iOS izao no misy
Ny Tetik'asa Microsoft xCloud beta ho an'ny iOS ary hanolorany serivisy fandefasana lalao video ho antsika, dia azo alaina amin'ny beta amin'ny alàlan'ny TestFlight.
Nilaza ny CEO an'ny Instagram fa tsy hisy fampiharana iPad intsony izao
Nilaza ny CEO an'ny Instagram fa amin'izao fotoana izao dia tsy hisy fampiharana ho an'ny iPad. Nilaza izy fa tsy manana loharanon-karena ampy hitazomana ny Instagram amin'ny iPhone sy iPad amin'ny fotoana iray izy ireo.
Nohavaozina ny LumaFusion mamela antsika hanondrana tetikasa mankany amin'ny Final Cut Pro X
Ireo tovolahy ao amin'ny LumaFusion dia manavao ny fampiharana amin'ny kinova 2.2 mamela antsika handefa rakitra XML azonay ampiasaina amin'ny Final Cut Pro X.
Hitsahatra tsy hanolotra famandrihana amin'ny alàlan'ny App Store ny YouTube TV
Manomboka amin'ny volana martsa dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny serivisy fahitalavitra Google ny mpampiasa TV YouTube.
Pokémon Home dia manolotra serivisy rahona ho an'ny Nintendo Switch sy fitaovana finday
Pokémon Home dia mamela antsika hahazo ranom-boankazo bebe kokoa amin'ny Pokémon anay ary hiampita ny Nintendo Switch miaraka amin'ny fitaovan'ny iOS na Android
Gmail for iOS dia hamela anay hametaka antontan-taratasy avy amin'ny fisie Files
Ny fanavaozana manaraka ny Gmail dia hahafahantsika miditra amin'ny atiny voatahiry ao anaty Files handefasana azy amin'ny mailaka
Raffle fahazoan-dàlana ho an'ny TVSofa, mba hahafahanao manaraka ny andian-tantara tianao sy ny sarimihetsika tianao
Raffle fahazoan-dàlana marobe ho an'ny TVSofa, fampiharana tsara indrindra amin'ny fanaraha-maso ireo andian-tsarimihetsika tianao indrindra amin'ny iPhone sy iPad.
Rindrambaiko Word, Excel ary PowerPoint nohavaozina ho an'ny iOS sy iPadOS
Namboarina indray ny fampiharana Word, Excel ary PowerPoint ho an'ny iOS sy iPadOS. Voasoratra avy amin'ny rangotra miaraka amina interface vaovao sy fiasa vaovao.
Apple dia manamarina ny fiantsenana ankapobeny ho an'ny iOS sy Mac amin'ny lohataona manaraka
Miaraka amin'ireo kinova beta an'ny fitaovana Apple rehetra, ny bandy avy ao Cupertino koa dia nanangana ny Xcode vaovao izay hamela ny fividianana rehetra.
Jery ​​todika amin'ny lalao Apple Arcade vaovao
Hodinihinay ny famoahana Apple Arcade hatreto amin'ny taona 2020 mba tsy halainao ary hanararaotra ny fisoratana anarana.
Ny fanadihadiana momba ny fampiharana Twitter ao amin'ny iOS dia misy indray
Taorian'ny fanavaozana farany ny kinova Twitter ho an'ny iOS, aseho amin'ny fampiharana ofisialy indray ny fanadihadiana fa tsy mila mampiasa ny kinova web ahafahana miditra
Google Translate dia nohavaozina manampy fanampiana ho an'ny maody maizina
Ny Google Translate malaza dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny maody maizina vaovao an'ny iOS 13 ka mifanaraka amin'ny loko vaovao an'ny iOS ny zava-drehetra.
Nohavaozina ny Microsoft Outlook mba hanohanana ny Split View
Ny fanavaozana farany an'i Outlook dia manome fanohanana feno ho an'ny Split View, ahafahantsika manokatra tranga roa an'ny fampiharana amin'ny efijery mizara amin'ny iPad.
TVSofa, ilaina ho an'ireo tia andian-tantara sy sarimihetsika
Ny olon-tiana amin'ny filma sy ny sarimihetsika dia tsara vintana satria farany manana fampiharana izay mampivondrona izay rehetra notadiavinay tamin'ny toerana iray izahay.
Apple dia manolotra kaonty mpamorona maimaimpoana any amin'ny firenena vaovao 8 ho an'ny ONG sy andrim-panjakana sy fanabeazana
Efa misy firenena 13 izay avelan'i Apple hanokatra kaonty mpamorona maimaimpoana ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa.
WhatsApp Pay tsy ho ela eto amin'ny firenentsika
WhatsApp Pay tsy ho ela eto amin'ny firenentsika. Miaraka amin'ny fahatsorana toy izao izay andefasanao sary any amin'ny reninao izao dia afaka mandefa 10 Euro amin'ny zanak'olo-mpianadahy aminao ianao.
Ireo mpampiasa Apple Card dia afaka mandefa ny fihetsik'izy ireo amin'ny fampiharana teti-bola
Apple dia mampihetsika ny fahafaha-manondrana ireo hetsika ataontsika amin'ny Apple Card hahafahantsika mampiasa azy ireo amin'ny fampiharana fanaraha-maso ara-bola sy teti-bola.
EA dia manamafy fa mbola miasa amin'ny famoahana Apex Legends amin'ny finday
EA dia nanamafy tamin'ny fampisehoana ny valim-bola mifandraika amin'ny telovolana farany tamin'ny taona 2019, fa mbola miasa amin'ny Apex Legeds ho an'ny finday
Lasa maimaimpoana i Fantastical ary manampy maodely famandrihana mba hahazoany tombony betsaka amin'izany
Ny fampiharana kalandrie Fantastical dia navaozina ho maimaim-poana miaraka amin'ny fetrany ary eo ambanin'ny famandrihana cross-platform.
Ny Apple Maps vaovao izao dia manerana an'i Etazonia, fijanonana manaraka any Eropa
Apple dia mamarana ny famolavolana ny fanatsarana ao amin'ny app Maps ho an'i Etazonia amin'ny alàlan'ny kendrena an'i Eropa ho an'ny fametrahana azy manaraka.
FiLMiC fandraketana fakan-tsary maro dia tonga miaraka amin'ny fampiharana DoubleTake vaovao
Ireo tovolahy avy amin'ny FiLMiC dia mandefa ny DoubleTake, ilay fampiharana ahafahantsika manao rakipeo fakan-tsary marobe miaraka amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny fakantsary roa amin'ny fitaovana.
Ny mpampiasa smartphone dia nandany $ 1.000 miliara ho an'ny titre Nintendo
Ny vola azo vokarin'ny lohateny Nintendo enina hita ao amin'ny App Store sy Play Store dia nahazo $ 1.000 miliara mahery.
Black Desert Mobile dia mahazo kilasy vaovao: Sorceress
Ny lalao Black Desert Mobile dia nanampy kilasy vaovao, kilasy andrasan'ny mpanaraka ity lalao mpamosavy ity.
Ny fampiharana HBO izao dia mamela ny votoatiny alaina amin'ny fitaovana
Aorian'ny fanavaozana farany ny fampiharana HBO ho an'ny iOS, azontsika atao ihany ny misintona atiny voafantina hijerena tsy misy fifandraisana Internet
Ireo mpampiasa IOS dia nandany $ 3.600 miliara tamin'ny famandrihana nandritra ny taona 2019
Nandritra ny taona iray hafa, ny famandrihana tamin'ny alàlan'ny App Store tamin'ny taona 2019 dia nihoatra ny vola azo tamin'ny taona lasa, nahatratra $ 3.600 miliara.
Mialà sasatra amin'ny fanaovana tapa-kazo miaraka amin'ny Wood Shop
Indray tolakandro indray dia mitsidika ny iOS App Store izahay ary mikasa hamela anao ...
EA hampiato ny fampiharana Tetris amin'ny volana aprily 2020
Ny orinasa EA Games dia manapa-kevitra ny hisintona ny lalao rehetra an'ny franchise Tetris ao amin'ny App Store, afaka hilalao hatramin'ny 21 aprily ho avy izahay.
Fanavaozana Fortnite hanampiana fanohanana 120 fps amin'ny iPad Pro
Ny fanavaozana farany avy amin'ny Fornite ho an'ny iPad Pro dia manohana ny 120 fps sy ny fanatsarana ny fanaraha-maso
Spotify dia manolotra lisitra an-tsarimihetsika manokana ho an'ny biby fiompinay
Ny zava-baovao atolotry ny Spotify antsika dia hita ao amin'ny lisitry ny lisitry ny biby fiompintsika mifototra amin'ny toetrany sy ny tsirony
Atsofohy miaraka amin'i Johnny Trigger sy ny fitifirany
Johnny Trigger, lalao video fanaovana hetsika minimalista izay ny bala no tena mpiorina.
HomeRun, fehezo ny HomeKit amin'ny Apple Watch
Miaraka amin'ny HomeRun dia afaka mifehy mora foana sy haingana ireo tontolo iainana ananantsika ao amin'ny HomeKit avy amin'ny Apple Watch isika miaraka amina fikitihana tokana eo amin'ny efijery.
Brain Out, minigames izay manandrana ny sainao
Ampisehoanay anao ny Brain Out, lalao vaovao izay manandramana ny sainao amin'ny iPhone anao, ho vitanao ve ny hahafehy azy?
Ny Doom sy ny Doom II dia havaozina mba hanohanana ny 60 fps
Ny DOOM mahazatra ho an'ny iOS dia nohavaozina mba hanohanana ny fanohanana 60 fps ary koa ny fampidirana endri-javatra vaovao sy fanatsarana.
Ny App Store dia mahatratra rakitsoratra fividianana vaovao ao anatin'ny iray andro
Nandritra ny taona iray hafa, ny vola azo azon'ny App Store amin'ny fialantsasatry ny Krismasy dia nitombo raha oharina tamin'ny taon-dasa ary nisy rakitsoratra vaovao tapaka
Ahoana ny fomba hijerena ireo isa mandresy an'ny Lotería del Niño?
Raha te hanamarina ianao raha nahazo na tsia ny tapakilan-tsarinao avy amin'ny sary miavaka an'ny Lotería del Niño dia ampiasao ireo fampiharana ireo.
Ny mpanorina ToTok dia mangataka ny hiverenan'ny fampiharana any amin'ny App Store
Ny iray amin'ireo mpanorina ny fampiharana ToTok, nesorina tamin'ny App Store voampanga ho mpitsikilo ho an'ny governemanta UAE, dia nangataka ny hamerenany ny App Store
Apple dia nanitatra ny fanatsarana ny mapa Apple ho any Etazonia afovoany sy atsimo atsinanana
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia namoaka Apple Maps vaovao, nohatsaraina ary feno tsipiriany any atsimo atsinanana sy afovoany Etazonia.
Monument Valley tsy misy afa-tsy 1,09 euro
Na eo aza ny efa ho 6 taona, Monument Valley dia mbola anaram-boninahitra mahafinaritra azo alaina ao amin'ny App Store amin'ny 1,09 euro fotsiny mandritra ny fotoana voafetra.
Apple dia hitondra antsika tsy ampoizina ao amin'ny App Store amin'ny 24 ka hatramin'ny 29 Desambra
Ny zazalahin'i Cupertino dia namerina ny andro fanomezam-pahasoavan'ny App Store tamin'ny 24 ka hatramin'ny 29 Desambra: fihenam-bidy amin'ny fividianana fampiharana sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny Noely.
Ny filàna mampiasa VPN amin'ny iPhone
Rehefa nandeha ny taona dia hitantsika ny fomba nahatonga ny angon-drakitra lasa zavatra irina avy amin'ny ...
Misy ny LEGO Builder's Journey ao amin'ny Apple Arcade
Ny lohateny farany efa azontsika ao amin'ny Apple Arcade dia antsoina hoe Joruney, LEGO Builder, lohateny mahafinaritra izay mampatsiahy antsika Monument Valley be dia be.
Ny fanohanana multiplayer amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny Mario Kart Tour dia misy amin'ny beta izao
Multiplayer dia azo alaina amin'ny beta ao amin'ny Mario Kart Tour ary voafetra ho an'ireo mpampiasa ny Golden Pass.
Ireo no fampiharana finday sy lalao be mpampiasa indrindra tato anatin'ny folo taona
Raha te hahalala ianao hoe iza amin'ireo manana rindranasa sy lalao be alaina indrindra tato anatin'ny folo taona lasa, manasa anao aho hamaky ity lahatsoratra ity.
Apple dia manala ilay fampiharana izay nanova ny iPhone ho iPod
Ny rindran-kira izay mamela anay hisintona hoditra hanolotra endrika mitovy amin'ny iPod, dia nesorina tao amin'ny App Store.
Ny Apple Store dia mandà ny lalao vaovaon'i PewDiePie satria maharikoriko loatra
Ny Apple Store dia niavaka foana tamin'ny alàlan'ny fanolorana toro lalana izay mampiahiahy indraindray, saingy misy izany ...
ITunes Remote App Ankehitriny dia manohana ny maody maizimaizina iOS 13
Ny rindranasa Apple farany vao nahazo maody maizimaizina dia ny iTunes Remote, fanavaozana iray izay mampisy fiasa vaovao roa lehibe
Ahoana ny fomba hahazoana ny Star Wars Tie Whisper mihantona glider ao Fortnite
Amin'ny herinandro ambony dia havoaka ny sarimihetsika vaovao ao amin'ny Star Wars saga: The Rise of Skywalker. Herinandro vitsivitsy lasa izay,…
Afaka mizara Sary mivantana ao amin'ny Twitter isika izao
Nandritra ny fanemorana an-taonany maro, ny fahafahan'ny famoahana Live Photos ao amin'ny Twitter dia efa zava-misy, saingy tsy dingana mora azo araka ny antenaina azy.
Black Desert Mobile, ilay MMORPG nandrasan'i Pearls Abyss nandrasana efa ela, izay hita ao amin'ny App Store
Mahazatra hatrany ny mahita lalao karazana MMO ao amin'ny App Store, fa tsy isika rehetra izay ...
Ireo mpampiasa Safari dia tsy dia mahaliana amin'ny tanjona dokam-barotra
Ny fiasan'ny Safari ahafahantsika misoroka ny tranokala notsidihinay, dia nahatonga ny fihenan'ny vidin'ny doka natokana ho an'ireo mpampiasa Apple
Afaka milalao Minecraft amin'ny iPhone na iPad amin'ny mpampiasa PS4 izahay izao
Ny console PlayStation 4 no hany sehatra mbola tsy nanolotra lalao miampita amin'ny Minecraft miaraka amin'ireo sehatra hafa.
Google Maps dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana mode incognito mba tsy hamela dian-dianay rehefa mampiasa ilay app
Google Maps dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny Mode Incognito be fangatahana hahafahantsika mampiasa ilay fampiharana nefa tsy mitahiry ny hetsika ataontsika.
Amerigo dia nohavaozina mba hanohanana ny endri-javatra misy varavarankely iPadOS
Ny mpitantana fisie Amerigo dia nohavaozina mba hanohanana ny endrika misy varavarankely an'ny iPadOS.
Procreate dia mahatratra ny kinova 5 misy motera manavao
Ny fampiharana Procreate dia havaozina amin'ny fitaovana vaovao sy motera sary vaovao hanararaotana ny 120 fps an'ny iPad Pro.
Ny kalandrie Readdle's and Calendars 5 dia manampy fanohanana ny Microsoft Exchange
Ny rindranasa Readdle amin'ny fitantanana ny kalandrie dia nohavaozina nanampy fanampiana an'i Microsoft Exchange
FBI Nangataka ny fampiharana FaceApp ho fandrahonana ho fanoherana ny fahaizan-tsaina noho ny fifamatorany amin'i Russia
Ny FBI dia nahavita ny famotopotorana momba ny application FaceApp, izay mamaritra fa loza mitatao ho an'ny filaminan'ny firenena izany.
Apple dia namoaka tranofiara ho an'ny Towaga: Among Shadows ao amin'ny YouTube, ilay Apple Arcade vaovao
Taorian'ny fironana tamin'ny famoahana ireo tranofiara tao amin'ny YouTube, Apple dia namoaka ilay tranofiara ho an'ny Towaga: Among Shadows, ilay lalao vaovao hita ao amin'ny Apple Arcade.
Apple dia manambara ny lalao sy ny fampiharana tsara indrindra amin'ny taona 2019
Ny mpamorona dia efa iray, ary mitohy, iray amin'ireo andry ifotony rehefa mamorona ecosystem ...
Ny fampiharana fandefasan-kafatra Signal dia mifanaraka amin'ny iPad ankehitriny
Betsaka ny mpampiasa nampiasa ny fampiasana ny rindranasa Signal ho toy ny sehatra fifandraisana lehibe indrindra…
PUBG Mobile dia hanampy maody Rage Gear amin'ny 11 Desambra
Ny hazakaza-pahafatesana antsoina hoe Rage Gear dia hamely ny PUBG Mobile amin'ny 11 Desambra
Tsy ho ela dia hanana ny kodiarana iPod click amin'ny iPhone isika
Ny mpamorona dia mamorona fampiharana maka tahaka ny kodiarana malaza amin'ny iPods hahafahantsika mampiasa azy rehefa mihaino mozika amin'ny iPhone.
Apple dia nanjary tsindry indray avy amin'ny governemanta, tamin'ity indray mandeha ity avy any Putin
Na eo aza ny fifanakalozan-kevitra izay ateraky ny Apple indraindray noho ny fihetsika ataony rehefa misy ny governemanta manao azy ...
Apple dia mandefa promo ho an'ny fandefasana lalao vaovao 11 ao amin'ny Apple Arcade
Apple dia nanararaotra ary nandefa promo vaovao tao amin'ny YouTube nanambara ny sasany amin'ireo fanampiana vaovao amin'ny katalaogin'i Apple Arcade.
flowkey: Mbola tsy tara loatra ny mianatra mitendry piano amin'ity app ity [SWEEPSTAKES]
Raha efa te-hianatra hitendry piano foana ianao ary sarotra aminao ny mahita fotoana malalaka hanaovana izany, mamela anao hianatra tanteraka amin'ny tadiny i flowkey.
Adobe dia hampiditra fiasa vaovao amin'ny taona 2020 amin'ny kinova Photoshop ho an'ny iPad
Mandritra ny taona 2020, Adobe dia hampiditra ny sasany amin'ireo fiasa lehibe izay hita ao amin'ny kinova birao amin'ny kinova iPad.
Call of Duty: Ny finday izao dia mifanaraka amin'ny mpanara-maso
Andro vitsy lasa izay dia namoaka lahatsoratra iray nampahafantatra anao ny fandefasana ny maody zombies Call of Duty aho: ...
Azo ampiasaina izao ny Minecraft Earth ho an'ny iOS
Ny Minecraft Earth ho an'ny iOS dia efa misy any Espana izao, amin'ny kinova fidirana aloha (première final) fa azo lalaovina sy azo ampiasaina tanteraka.
Ankehitriny Castro Podcast Player dia milalao mivantana amin'ny Apple Watch
Ankehitriny miaraka amin'ny fanavaozana vaovao, Castro Podcast Player milalao mivantana amin'ny Apple Watch
Call of Duty: ny maody zombie an'ny Mobile dia ho tonga amin'ny 22 Novambra
Call of Duty: Ny maody zombie nandrasana hatry ny ela an'ny finday dia ho hita manomboka amin'ny 22 Novambra
Amazon dia nanitatra ny serivisy mozika mivantana maimaimpoana ho an'ny fitaovana iOS
Ny serivisy mozika mivantana maimaim-poana an'i Amazon dia misy amin'ny fitaovana iOS ihany koa.
Deezer HiFi misy amin'ny iOS izao
Deezer HiFi High Fidelity Music Streaming Platform Azo alaina amin'ny iOS izao
Apple dia nanambara hetsika tsy nampoizina tamin'ny 2 Desambra
Rehefa toa nanondro ny zava-drehetra fa hifarana ny taona tsy misy hetsika fahalavoana, tampoka dia nanambara i Apple ...
Hanjavona ao amin'ny iOS sy Android ny fampiharana Cortana amin'ny Janoary 2020
Ny fampiharana finday Microsoft Cortana dia hajanona amin'ny Microsoft amin'ny fiandohan'ny taona 2020.
Mihantona manodidina ny Fortnite mandritra ny andro vitsivitsy ny stormtroopers
Nandritra ny andro vitsivitsy, Fortnite dia tsy namaritra raha tsy hoe rahoviana no misy izany, azontsika atao ny mividy ilay miaramila emperora amin'ny Star Wars ao amin'ny fivarotana lalao.
Call of Duty: Mobile dia mahatratra 148 tapitrisa ny fisintomana amin'ny volana voalohany
Ny fahombiazana amin'ny resaka fampidinana Call of Duty dia nohamafisin'ireo angona navoakan'ny Sensor Tower izay manondro fa efa ho mihoatra ny 150 tapitrisa ny fampidinana
Ireto ny lalao vaovao 6 misy ao amin'ny Apple Arcade
Lalao vaovao enina no lasa ampahany amin'ny katalaogy misy amin'ny alàlan'ny famandrihana Apple Arcade.
Fantaro ny valin'ny Fifidianana an'ny 10N avy amin'ny iPhoneo
Zahao ny valin'ny fifidianana amin'ny alàlan'ny 10N Elecciones, fampiharana ofisialin'ny Minisiteran'ny Atitany hahafantarana ny valin'ny 10N.
Ny Airtime ao amin'ny iOS 13.3 dia mamela anao hametra fetra amin'ny antso sy hafatra
Fotoana fampiasana ny iray amin'ireo fiasa izay avy am-pelatanan'ny iOS 12, asa iray izay…
Ofisialy io: Disney + dia ho tonga any Espana amin'ny 31 martsa 2020
Vao nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny datin'ny fisian'ny serivisy horonantsary streaming, Disney + any Espana sy ireo firenena eropeana hafa i Disney.
Manaraka, fomba hafa handinihana ny mozika ao amin'ny tranombokinao Apple Music
Ny manaraka dia fampiharana izay mifanaraka amin'ny kaontinao Apple Music ary manadihady ny fitehirizam-bokinao hanoroana ny playlists tsy mampino.
Adobe Illustrator, Ho avy ihany koa amin'ny iPad amin'ny taona 2020
Adobe Illustrator koa dia hanana kinova ho an'ny iPad izay hahafahanao manararaotra azy io miaraka amin'ny Apple Pencil sy ny fakan-tsary.
Ny mode multiplayer an'i Mario Kart Tour dia ho tonga amin'ny Desambra
Hatramin'ny volana desambra dia tsy ho hita amin'ny beta ny multiplayer Mario Kart Tour ary voafetra ho an'ireo mpampiasa izay nividy ny Golden Pass.
Hanohana ny fiasa Split View i Outlook, hanampy modely tsy hanelingelina sy fampirimana marani-tsaina
Ny fanavaozana ny Outlook Future dia hanampy tohana amin'ny Split View, lahatahiry hendry ary fomba vaovao tsy hanelingelina.
Ny serivisy mozika streaming Google Music YouTube Music dia manohana an'i Siri izao
Ny serivisy fandefasana mozika YouTube izao dia manohana an'i Siri, mpanampy manokana an'i Apple.
Tantano tsara ny ekipanao amin'ny bisikileta amin'ny Live Cycling Manager 2
Na amin'ny App Store na ivelan'izany dia afaka mahita rindranasa samihafa izahay izay manampy anay hitantana ekipa ...
Apple dia manamafy ny fanesorana ireo fampiharana 17 iPhone miaraka amin'ny voalaza fa "malware"
Azo antoka fa nanitsakitsaka ny fitsipiky ny Apple store ireo fampiharana ary mihoatra ny malware izany no tsy maha-misy azy ireo intsony.
Miresaka ny maodely Spotify 'tsy nahomby' ireo mpandinika
Ireo tovolahy ao amin'ny Spotify dia hahita ny maodelin'ny orinasan'izy ireo mandalo ny fotoan-tsarotra indrindra noho ny tsindry avy amin'ireo orinasam-pandraisana an-tsoratra miaraka amin'ny mpanjaka.
LumaFusion dia manampy fanohanana ireo kapila ivelany sy endritsoratra manokana
Ny mpamoaka horonantsary ho an'ny matihanina, LumaFusion dia nohavaozina mba hanampiana roa amin'ireo zava-baovao lehibe atolotry ny iOS 13 antsika
WhatsApp dia efa mamela anao handrindra izay afaka manampy anao amin'ny vondrona sy izay tsy afaka
Safidy manokana momba ny tsiambaratelo WhatsApp ahafahanao misafidy izay afaka manampy anao amin'ny vondrona sy ny tsy afaka. Azavainay ny fiasan'izy io.
Ankizilahy 14 taona dia mpamorona iray amin'ireo lalao Apple Arcade
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia misafidy ny Operator 41, lalao video novolavolain'ny zazalahy kely 14 taona ho an'ny fanombohan'ny Apple Arcade.
Ny lalao League of Legends dia ho tonga amin'ny finday amin'ny taona 2020
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, hitantsika ny fomba nanombohan'ny filalaovana lalao video lehibe amin'ny filalaovana finday, ...
Ny fidirana Siri izao dia misy ao amin'ny Google Voice
Ny serivisin'i Google hiantsoana sy handefasana SMS, Google Voice dia nanavao ny fampiharana azy ho an'ny iOS mba hampifanaraka azy amin'ny Siri
Navaozina ny PUBG Mobile tamin'ny fampidirana ny laharam-pahamehana
Ny fanavaozana farany ny PUBG dia manome antsika fampiasa vaovao marobe, izay efa misy amin'ny kinova PC ny ankamaroany
Word, Excel, ary PowerPoint izao dia manohana ny maody maizin'ny iOS 13
Ny maody maizina izay avy am-pelatanan'ny iOS 13 dia efa misy ao amin'ny application an'ny Office aorian'ny fanavaozana farany.
Reddit dia mamela anao hizara ny hafatrao amin'ny Snapchat mivantana
Niara-niasa i Reddit sy Snapchat hanolotra sticker iray manokana ho an'ny Snapchat izay hanolorany ny atiny Reddit.
Activision dia nilaza fa Call of Duty: Mobile dia mety ho mifanentana amin'ny mpanara-maso
Call of Duty vaovao avy amin'ny App Store dia afaka mahazo mpanohana mpanohana amin'ny fanavaozana ho avy, hoy ny filazan'ny Activision
Azavainay ny fomba fanafoanana ny Apple Arcade alohan'ny hifaranan'ny volana maimaim-poana
Azavainay ny fomba fanafoanana ny Apple Arcade alohan'ny hifaranan'ny fotoana fitsarana maimaimpoana
Apple Arcade dia mandefa lalao traikefa nahafinaritra, hazakaza ary ady 5 vaovao
Mamokatra an'i China indray i Apple ary manaisotra ny fampiharana nampiasaina tamin'ny fihetsiketsehana tao Hong Kong indray
Ny bandy Cupertino dia nanandrana nanamarina ny fisintomana ny fangatahana HKMap izay ahafahan'ny olom-pirenena Hong Kong mahafantatra hoe aiza no misy ny fifantohana.
Ny fividianan'i Apple an'i Shazam dia ahafahanao mampitombo ny tombom-barotra sy ny isan'ny mpampiasa
Taorian'ny fividianana an'i Shazam an'i Apple dia nanomboka nanolotra tombony ny orinasa britanika ankoatry ny fampitomboana ny isan'ny mpampiasa.
Ny Xbox One Controller dia hita ao amin'ny katalaogin'ny vokatra Apple
Apple dia manolotra ny Xbox One console Controller amidy amin'ny tranokalany sy amin'ny fivarotana orinasa
Call of Duty: Mobile mihoatra ny 100 tapitrisa fisintomana
Rehefa afaka volana maromaro, dia namoaka ny kinova farany an'ny iray ry zalahy avy any Activision miaraka amin'ny Tencent.
Maody maizina IOS 13 azo alaina ao amin'ny Instagram izao
Taorian'ny tsaho sy ny fanombohana ny iOS 13, namoaka ny fanavaozana Instagram mifanaraka amin'ny fomba maizina vaovao an'ny iOS 13 ny Facebook.
Ny maizina maizin'ny IOS 13 dia mifanaraka amin'ny Microsoft's Outlook ankehitriny
Ny maody maizimaizina ho an'ny Outlook dia misy amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny fampiharana farany.
Call of Duty: finday no lohalaharana amin'ny lisitry ny lalao alaina indrindra any amin'ny firenena 100 mahery
Andro vitsivitsy monja eny an-tsena, Call of Duty: Mobile no nanjary lalao be indrindra alaina any amin'ny firenena maherin'ny 100 ao amin'ny App Store.
DearMob iPhone Manager: ny fitaovana tsara indrindra hitantanana ny fitaovan'ny iOS anao (Fampidinana maimaim-poana)
Fantaro ny zava-drehetra momba ny DearMob iPhone Manager, ilay fitaovana ampiasaina hitantanana ny angona amin'ny iPhone na iPad amin'ny fomba tsotra indrindra.
Pejy, Isa ary Keynote dia miarahaba ny fahatongavan'i iOS 13 sy iPadOS
Apple dia nanavao ny pejin'ny Office suite, Number ary Keynote an'ny Office suite, nanampy ireo fiasa vaovao mifanaraka amin'ny iOS 13 sy iPadOS.
Ny fampiharana sary Halide dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanana ireo fakantsary vaovao amin'ny iPhone 11 Pro
Ireo mpandrindra ny fampiharana fakana sary Halide dia manavao ny fampiharana mamela ny fampiasana ireo fakantsary vaovao telo an'ny iPhone 11 Pro.
Ny iPhone 11 dia tsy mampiato ny mozika rehefa manoratra horonantsary isika
Noho ny fiasan'ny QuickTape, afaka mandray horonantsary amin'ny iPhone tsy misy mozika izay mijanona mijanona amin'ny fotoana rehetra isika.
Apple sy Maroon 5 dia avelao hampiasa ny hira vaovaon'izy ireo amin'ny fampiharana Photos
Ny hira vaovao avy amin'ny Maroon 5 dia azo alaina maimaim-poana amin'ny alàlan'ny endri-javatra Fahatsiarovana ao amin'ny iOS 13 amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch.
Ireo tovolahy ao Cloudflare dia mandefa Warp, ny VPN malalaka sy azo antoka ho an'ny iOS
Rehefa avy nizaha toetra tamin'ny beta testers ry zalahy tao Cloudflare dia nandefa ny serivisy VPN maimaimpoana ho an'ireo mpampiasa iOS rehetra.
Ny Minecraft Earth ho an'ny iOS dia manomboka amin'ny volana oktobra
GarageBand dia efa manolotra fanampiana ho an'ny fitaovana ivelany rehefa manavao ny iOS 13
Ny fampiharana Apple Music hamoronana mozika na aiza na aiza misy antsika, GarageBand dia mifanaraka amin'ny iOS 13 sy ny maody maiziny ary ny fidirana amin'ireo fitaovana ivelany.
Roma: Ady tanteraka - Azo alaina amin'ny 24 Oktobra ho an'ny iPhone i Alexander
Manomboka ny 24 Oktobra ho avy izao, Roma: Ady Total - Alexandre dia ho hita amin'ny iPhone, roa taona aorian'ny fandefasana ny kinova iPad.
Ny fampiharana djay an'i Apple dia havaozina amin'ny iOS 13 ary ny drive ivelany dia tohanana ankehitriny
Ny fampiharana hamoronana mozika amin'ny iPhone sy iPad, djay, dia navaozina mba hifanaraka amin'ireo kapila ivelany, endri-javatra iray izay miaraka amin'ny iOS 13
iMovie sy Clips dia efa mifanaraka amin'ny maody maizin'ny iOS 13 ankoatry ny zava-baovao
Ny fampiharana Apple voalohany izay efa nohavaozina mba hifanaraka amin'ny iOS 13 sy ny maody maizina dia ny iMovie sy Clips.
IKEA Place dia manatsara ny fifandraisany ary manitatra ny fampidirana ny tena zava-misy
IKEA Place dia nohavaozina tamin'ny alàlan'ny fanampiana andraikitra vaovao mifandraika amin'ny fampidirana ny tena zava-misy ary fanovana ny interface.
Tonga any Fortnite ihany ny bot sy ny fanaovana lalao miaraka amin'ny fanavaozana farany
Toa tsy nankasitrahan'ny mpampiasa maro ny vanim-potoana 10 an'ny Fortnite. Mpilalao mahazatra manana ...
Alefaso amin'ny iPhone vaovao miaraka amin'ny AnyTrans ny fampahalalana rehetra
Miaraka amin'ny fampiharana AnyTrans dia mora tokoa ny mamindra ny angona rehetra avy amin'ny iPhone iray mankany amin'ny iray hafa amin'ny fomba haingana sy tena tsotra.
Mandefa fampiharana ho an'ny watchOS 6 ny CARROT Weather ary mahazo vaovao ho an'ny iOS 13
Ny CARROT Weather dia mandefa ny fanavaozana vaovao miaraka amin'ny vaovao izay misy ifandraisany betsaka amin'ny fandefasana ny watchOS 6 sy ny iOS 13 vaovao.
Call of Duty: Handeha miaraka amin'i Battle Royale i Mobile amin'ny volana ho avy
Call of Duty: Mobile, ny kinova mahasahy indrindra an'ny saga ho an'ny iOS sy Android, manana endrika «fitsapana» ...
Pocket Casts fampiharana podcast dia lasa afaka tanteraka
Ny fampiharana Podcast Overcast dia nanjary azo alaina maimaim-poana tanteraka, tsy misy doka ary tsy misy fetrany ao anaty ny fampiharana.
Ny fampiharana Waze GPS dia hampandre antsika rehefa mandalo ny Madrid Central ny lalantsika
Waze dia mampihetsika ny lahasa izay hampandre antsika rehefa afaka mamakivaky ireo faritra avo lenta toa ny Madrid Central ny lalantsika.
Apple Arcade: Raha manomboka misintona lalao ianao dia jereo hatrany ny fahaizan'ny iPhone
Nohavaozina ny Twitter mba hifanaraka amin'ny maody maizina mandeha ho azy an'ny iOS 13. Asehonay aminao ny fomba hampiasana azy
Twitter dia nahazo fanavaozana fotsiny mba hanampiana ny fahaizany mampandeha maody maizina mandeha ho azy mifototra amin'ny fananganana rafitra. Ao amin'ny iOS 13 ihany.
FiLMiC Pro fandraketana fakantsary marobe dia ho tonga amin'ny iPhone XS sy iPhone XR
Ny firaketana fakan-tsary mahafa-po an'ny fampiasa vaovao an'ny FiLMiC Pro ho an'ny iOS dia hifanaraka amin'ny iPhone XR sy XS ihany koa.
Spotify dia hanomboka hampiasa ny toerana misy ny fitaovana hifehezana ireo mpikambana ao amin'ny drafitry ny fianakaviana
Spotify dia manana drafitra vaovao hifehezana ireo mpampiasa ny drafitry ny fianakaviany: ampiasao ny toerana GPS hanamarinana fa mipetraka amin'ny toerana iray ihany izy ireo ...
Apple dia manome hatramin'ny 3 martsa 2020 ho an'ny fampiharana an'ny ankizy hanaraka ny lalàna vaovao
Apple dia manome hatramin'ny 3 martsa 2020 ho an'ny fampiharana ao amin'ny sokajy Ankizy mba hanaraka ny fenitra fiarovana ny zaza vaovao
Apple dia manitsy ny algorithm an'ny App Store mba hampihenana ny fisian'ny fampiharana azy amin'ny valiny
Ny valin'ny fikarohana ao amin'ny App Store dia novaina mba tsy hanome lanja firy ny fampiharana Apple
Telegram dia efa mamela antsika handahatra ny fandefasana hafatra
Ny fanavaozana Telegram farany dia mamela antsika handahatra ny fandefasana hafatra amin'ny andro sy ora voafaritra. Azavainay ny fomba fanaovana azy.
Tsy mandeha mandritra ny fotoana fohy ny fahaizana mandefa bitsika amin'ny alàlan'ny SMS i Twitter
Taorian'ny fanapahana ny kaontin'ny CEO CEO Twitter dia nanakana ny fahafahany mandefa tweeet amin'ny alàlan'ny SMS ilay sehatra microblogging
Brown Dust dia mahazo fanohanana ny Espaniôla amin'ny fanavaozana azy
Fantaro bebe kokoa ny fanatsarana izay ampidirina ao amin'ny Brown Dust amin'ny fotoana fanavaozana azy, izay efa ofisialy izao ary azo sintonina amin'ny iOS.
Manao izany indray ny Facebook: manivana nomeraon-telefaona an-tapitrisany ry zareo
Ny tambajotra sosialy par Facebook, dia tokony hanana lavaka fandriam-pahalemana, tafaporitsaka manakaiky ny laharana finday 419 tapitrisa.
Plex hanolotra sarimihetsika tohanan'ny dokambarotra maimaimpoana taorian'ny fifanarahana nifanaovana tamin'i Warner Bros
Vao nanambara izany izy ireo: Hanolotra sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika Warner Bros ho antsika maimaimpoana i Plex (na manana Plex Pass isika na tsia) miaraka amina doka.
Pokémon Master dia misy ao amin'ny App Store
Ny lalao vaovao eo amin'ny tontolon'ny Pokémon dia azo alaina ao amin'ny App Store ankehitriny ary antsoina hoe: Pokémon Master, izay tsy maintsy hifaninanan'ny mpanazatra sy ny Pokémon ho tsara indrindra
Microsoft dia miomana amin'ny maody maizin'ireo fampiharana ho an'ny iOS
Taorian'ny maody maizina vaovao an'ny iOS 13, avelan'i Microsoft hampiasa ny maody maizina vaovao amin'ny fampiharana rehetra ho an'ny iOS.
Niala tsiny i Apple fa nihaino an'i Siri izy ary nanambara izay hataony manomboka izao
Niala tsiny i Apple noho izy nihaino ny fangatahanay tamin'i Siri ary nanambara ihany koa ny fanovana izay hapetraka ho fanajana ny fiainantsika manokana.
Ny fampiharana filokana rehetra dia omen'i Apple isa hatramin'ny 18 taona
Ny fangatahana filokana rehetra, namboarina na tena izy, dia nanjary hita tao amin'ny App Store ihany ho an'ireo mihoatra ny 18 taona.
Mario Kart Tour dia hamely ny App Store amin'ny 25 septambra
Ny daty ofisialy ofisialin'ny Mario Kart Tour ho an'ny fitaovana finday dia ofisialy izao: 25 septambra.
Plex dia havaozina amin'ny kinova 6.0 miaraka amin'ny bara fitetezana azo namboarina
Plex dia nohavaozina amin'ny kinova 6.0 manampy endri-javatra vaovao toy ny fanavaozana ny sidebar sy ny bibikely be mpiorina.
Adobe nandefa ny beta voalohany an'ny Photoshop ho an'ny iPad
Ireo tovolahy ao amin'ny Adobe dia akaiky ny hanomboka ny Photoshop feno ho an'ny iPad taorian'ny nanombohany nandefa ny kinova Beta ho an'ireo matihanina amin'ity sehatra ity.
FileMaker dia Claris izao
Ny serivisy fampandrosoana ny tahiry ho an'ny fampiharana finday FileMaker, dia nanambara fa manomboka izao dia hantsoina hoe Claris, ka hiverina amin'ny anarany voalohany
Ny vidin'ny Apple Arcade isam-bolana dia 4,99 euro
Araka ny fantatry ny haino aman-jery 9to5Mac, ny vidin'ny Apple Arcade dia 4,99 euro isam-bolana, hanana volana fitsarana maimaimpoana izy ity ary hifanaraka amin'ny Family Sharing
Aza miandry ny iOS 13 handeha amin'ny lafiny maizina
Aza miandry ny iOS 13 handeha amin'ny lafiny maizina. Azonao atao ny mametraka ny maody maizina amin'ny rindranasa marobe alohan'ny hahatongavan'ny iOS 13
Siri mikapoka an'i Alexa amin'ny faharanitan-tsaina fa tsy mandresy ny Google Assistant
Toa ny fitsapana nataon'i Gene Munster an'ireo mpanampy telo be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao no nametraka an'i Siri tamin'ny toerana faharoa.
Facebook dia nandoa ny antoko fahatelo handika ny raki-peo Facebook Messenger
Toa an'i Google, Amazon ary Apple, ireo tovolahy avy amin'ny Facebook dia nanolo-tena ihany koa handika ny resaka, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia ireo nalefan'ny Messenger
Dr. Mario World dia nahatratra 7,5 tapitrisa ny fisintomana tamin'ny volana voalohany
Dr. Mario World dia nahatratra 7,5 tapitrisa ny fisintomana tamin'ny volana voalohany. Lalao ankamantatra maimaimpoana ho an'ny fitaovana finday iOS sy Android ity.
Nanamafy ny Twitter fa miasa izy mba hanampiana fanohanana ny Live Photos eo amin'ny sehatra misy azy
Hatramin'ny nandefasan'i Apple sary mihetsika amin'ny alàlan'ny asan'ny Live Photos, tsikelikely dia ...
Adobe Lightroom dia nohavaozina mamela ny famerenana ireo sary voafafa
Nanavao ny fampiharana Adobe Lightroom ho an'ny kinova 4.4.0 i Adobe, nanampy endri-javatra vaovao marobe toa ny fahafaha-mahazo sary voafafa.
Azo atao izao ny mandefa hafatra tsy misy feo amin'ny alàlan'ny Telegram
Misaotra ny fanavaozana Telegram 5.10, afaka mandefa hafatra ihany izahay amin'ny farany izay tsy milalao feo amin'ny fitaovan'ny mpandray.
Estera malala ho an'ny iOS dia havoaka amin'ny faran'ny taona
Ny efi-trano sinoa dia miteny amintsika amin'ny alàlan'ny twitter Ry Esther malala ho an'ny fitaovana iOS dia hatsangana alohan'ny faran'ity taona ity
Ny lalao Journey nahazo loka dia azo alaina ao amin'ny App Store
Iray amin'ireo lalao tsara indrindra mahavariana eo amin'ny tontolon'ireo lalao video, Journey, izay azo alaina ao amin'ny lalao Apple sy fivarotana fampiharana
Mamolavola fomba iray handrefesana ny tosi-dra amin'ny horonantsary na selfie izy ireo
Vetivety dia azo refesina na aiza na aiza ary amin'ny fotoana rehetra ny tosidra amin'ny alàlan'ny selfie na horonan-tsary 30 segondra amin'ny iPhone.
Apple dia nanamboatra kitapo zava-misy marina ho an'ny LEGO: Hidden Side.
Apple dia nanamboatra kitapo zava-misy marina ho an'ny LEGO: Hidden Side. Mampiasà fampiharana fampitomboana tena izy mba hifandraisana amin'ny iPhone sy iPad.
Apple dia hamela anao hisafidy raha te hohenoina ianao na tsia
Mamaly ny resabe ateraky ny fihainoana ny baiko Siri, nampiato ny programa fanatsarana ny mpanampy azy i Apple
Tim Cook dia manasonia ny mpiara-manorina an'i Xbox ho an'ny Apple Arcade
Tim Cook dia manasonia ny mpiara-manorina Xbox sy injenieran'ny valve (Half-life, Counter-Strike) ho an'ny New Exclusive Game Platform Apple Arcade
Sky: Children of the Light, lalao tsara indrindra hankafizanao ny fahavaratra
Ankafizo ny fahavaratra miaraka amin'ny Sky: Children of the Light, ilay lalao nandrasana hatry ny ela izay nampahafantarina anay tamin'ny famoahana ny Apple TV 4K.
Lockdown dia mandefa firewall voalohany misokatra ho an'ny iOS
Ireo tovolahy ao amin'ny Duet Display dia mandefa Lockdown, ny firewall loharano misokatra voalohany ho an'ny iOS mba hiarovana bebe kokoa ny angon-tsainay.
Ny CARROT Weather dia mandray iPad multitasking, iCloud syncing ary maro hafa
Nohavaozina ny toetr'andro CARROT Weather izay namorona endrika vaovao ny fampiharana ho an'ny iPad, fampifanarahana amin'ny iCloud ary tena multitasking amin'ny iPad.
Ahoana ny fampifandraisana ny PS4 na Xbox One Controller amin'ny iOS 13
Miaraka amin'ny iOS 13 sy iPadOS dia azonao ampiasaina ny mpanara-maso ny PS4 sy Xbox One amin'ny iPhone, iPad ary Apple TV anao amin'ny lalao mifanaraka amin'ny mpanara-maso MFI
Apple dia mety mankafy ny fampiharana azy manokana amin'ny valin'ny fikarohana ao amin'ny App Store
Ny Wall Street Journal dia hiampanga an'i Apple ho mankasitraka ny fampiharana ataon'ny orinasa ao amin'ny motera fikarohana ao amin'ny App Store noho ireo an'ny fifaninanana.
1Password dia manohana sy mamerina amin'ny laoniny ireo valizy ao an-toerana maimaimpoana
Niverina ireo zalahy tao amin'ny 1Password ary namela indray ny famoronana tranokala maimaimpoana maimaimpoana ho an'ireo mpampiasa izay afaka nandoa ilay fampiharana.
Tandremo ny FaceApp: ny "selfie" -nanao taloha dia "mangalatra" ny zonao
FaceApp dia mampakatra ny sarin'ny mpampiasa rehetra mametraka azy amin'ny mpizara azy, na tianao izany na tsia, mangalatra ny sarinao izy ireo.
FaceApp no ​​fampiharana izay manova anao ho antitra manana sary
Ampianarinay anao ny fomba hahatongavanao ho "antitra" miaraka amin'ny fakantsary selfie noho ny fampiharana FaceApp sy ny vokany retouching sary malaza.
Airmail dia mankany amin'ny maodely maimaim-poana miaraka amin'ny fisoratana anarana ary tezitra ny mpampiasa azy
Gaga ireo tovolahy ao amin'ny Airmail ary namadika ny mpandrindra mailaka malaza ho lasa fampiharana maimaim-poana miaraka amina fisoratana anarana premium.
Ny fampiharana Eve automatique an-trano dia mahazo maody maizina amin'ny fanavaozana vaovao
Ny fampiharana mifandraika amin'ny automatisation an-trano, Eve, dia nohavaozina amin'ny kinova 3.8 miaraka aminy ny maody maizina sy ny vaovao ho an'ny Eve Aqua.
Mpiasa amin'ny fahasalamana Apple maro no mandao ny orinasa
Iray amin'ireo tompon'andraikitra lehibe indrindra any Etazonia, Anthem, dia nanomboka nanasonia ny maro amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny Apple Health
Ny Pool Dr. Dr. Panda dia misy maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Mandritra ny fotoana voafetra dia afaka mahazo ny lalao Pool Dr. Dr. Panda ho an'ny ankizy isika, maimaimpoana tanteraka ary hitahiry ny vola 5,49 euro izay vidiny matetika.
Tranofiara vaovao ho an'ny Dr. Mario World izay anehoan'izy ireo amintsika ny maody marobe
Andro vitsy talohan'ny nanombohan'ny Dr. Mario World, ireo bandy avy amin'ny Nintendo dia nandefa horonantsary vaovao tao amin'ny YouTube mampiseho ny maody multiplayer
Ireo labozia mahaleo tena dia nahavita nampitombo ny tsenan'izy ireo noho ireo sehatra mozika mivantana
Na dia lasa heverina ho mpamonjy ny marika firaketana sy mpanakanto malaza aza ny Apple Music rehefa ...
Apple News + dia tsy toeram-pitrandrahana volamena natoky ny mpanonta
Telo volana taorian'ny nanombohana azy dia toa nihena ny fanantenana tsara manodidina ny Apple News + ary zara raha tratry ny mpanonta ny vola miditra.
Hill Climb Racing 2 dia nahazo fanavaozana tamin'ny kamio kamiao vaovao, endrika vaovao ary maro hafa
Ny kinova farany an'ny lalao Hill Climb Racing 2 dia feno fiasa vaovao ahafahantsika manana fotoana mampiala voly amin'ny fitaovana iOS.
Ireo pejy, isa ary Keynote dia havaozina ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny Apple Pencil sy ny maro hafa
Ny fanavaozana vaovao ny Pejy, Nomery ary Keynote dia manitatra ireo fiasa azo alaina miaraka amin'ny Apple Pencil an'ny taranaka faharoa
14 Andro fahavaratra no hetsika vaovao iarahan'ny Fortnite mankalaza ny fahatongavan'ny fahavaratra
Ho an'ireo mpankafy Fortnite dia manana antony iray hafa hankafizana ity lalao ity amin'ny fahavaratra, ny Epic Games dia nanampy hetsika vaovao miaraka amin'ny valisoa maimaimpoana.
Harry Potter: Mitambatra ireo mpamosavy - Pokemon GO Magic Tonga amin'ny iOS
Harry Potter: Wizards Unite dia misy ao amin'ny App Store an'ny firenena sasany, saingy efa ofisialy ny fandefasana ary azonao atao ny misintona azy eran'izao tontolo izao.
Ny mpampiasa Spotify sasany dia mihevitra ny handeha ho any Apple Music aorian'ny fanavaozana farany ny fampiharana
Resabe tao Spotify taorian'ny fanavaozana farany ny fampiharana izay tadiavin'izy ireo hampiroboroboana podcast ... Ary mpampiasa maro no te hiverina amin'ny famolavolana teo aloha.
Raha mampiasa Microsoft To-Do ianao ary manana Mac, dia efa misy izao ny rindranasa macOS ofisialy
Vao avy nandefa fampiharana vaovao an'ny serivisy To-Do ho an'ny solosaina Mac i Microsoft, ka manarona ny tontolo iainana rehetra eny an-tsena.
Adobe dia manolotra «Fresco» ny fampiharana sary vaovao natao ho an'ny iPad
Ireo bandy ao amin'ny Adobe dia manantena ny fandefasana ny Photoshop amin'ny alàlan'ny fandefasana an'i Fresco, ilay fampiharana izay hanoratantsika amin'ny iPad misy borosy tena izy.
Ny salama ara-pahasalamana dia ilay zavatra Fortnite vaovao hanarenana sy hanome fiainana na ampinga ho an'ny namana
Ny fanavaozana Fortnite vaovao dia manampy zavatra vaovao: splash mahasalama, zavatra iray ahafahantsika miverina sy manome fiainana na ampinga
Dr. Mario: World dia ho tonga amin'ny iPhone sy iPad amin'ny 10 Jolay
Dr. Mario: World dia ho tonga amin'ny iPhone sy ny iPad amin'ny 10 Jolay, lalao tsy dia mahazatra loatra izay ahafahantsika mankafy ny fiatoana amin'ny fitateram-bahoaka.
Mattel dia manolotra Hot Wheels id Smart Track miaraka amin'ny fiara izay mampiditra ny chip NFC
Mattel dia manome amin'ny alàlan'ny Apple Store, ny làlan'ny Smart Wheels id, izay ahitantsika ny angona fiara avy amin'ny iPhone na iPad
Ahoana ny fomba filalaovana ny Controller PS4 amin'ny iPad, iPhone ary Apple TV
Ny fanolorana iPadPOS, mitovy amin'ny iOS 13 ho an'ny iPad, dia nahagaga anay: nampian'i Apple ny mifanentana ...
Ny Twitterrific dia mamely ny andiany 6 miaraka amin'ny autoplay, lohahevitra vaovao, maodely vaovao ary maro hafa
Twitterrific dia tonga amin'ny kinova faha-6 miaraka amin'ny rafitra fanangonam-bola vaovao sy ireo zava-baovao mahafinaritra momba ny hatsarana sy fiasa.
Fanjonoana mpihaino podcast, Spotify vao noforonina ho fampiharana podcast antsika
Ny bandy ao amin'ny Spotify dia maniry ny fampiharana azy ireo ho fampiharana tianay indrindra hihainoana podcast, nohavaozin'izy ireo izany mba hahamora ny fihainoana azy ireo.
PUBG Mobile no nitarika ny laharan'ny fidiram-bola amin'ny finday tamin'ny volana Mey
Teo anelanelan'ny volana aprily sy martsa tamin'ny taon-dasa, samy Fortnite sy PUBG Mobile no tonga teny amin'ny tsena tamin'ny finday, na dia Fornite ...
Gears POP! Ity no toa Gears of War ho an'ny iPhone
Nanamafy i Microsoft fa Gears POP! dia ho tonga amin'ny iPhone, lalao mahafinaritra fanafihana mifototra amin'ny fihodinana amin'ny fomba Clash Royale ho anao hankafizinao tanteraka.
TomTom dia manavao ny fampiharana fitetezana misy sari-tany ivelan'ny fiara ao amin'ny CarPlay
Ny fampiharana TomTom GO dia nohavaozina mba hanampiana fampiasa fampidinana sari-tany an-tserasera amin'ny alàlan'ny CarPlay.
Wallet dia hifanaraka amin'ny tapakila mankany amin'ny kianjan'ny oniversite any Etazonia
Wallet dia hamela anao hitahiry tapakila amin'ny lalao anjerimanontolo any Etazonia ao anatin'ny iPhone sy Apple Watch
iOS 13 dia hampahafantatra antsika raha manampy hira vaovao amin'ny lisitry ny playlist Apple Music izay efa tafiditra ao isika
Miaraka amin'ny iOS 13, tsy ampianao intsony ilay hira mitovy amin'ilay lisitry ny playlist iray ihany amin'ny fotoana mihoatra ny indray mandeha.